Pixelz: Serivisy famerenana sary amin'ny laoniny fangatahana ho an'ny e-varotra | Martech Zone
Raha efa namolavola na nitantana tranokala ecommerce ianao, lafiny iray manakiana fa ny fandaniana fotoana dia ny fahafahanao mitazona hatrany ny sarin'ny vokatra izay mankasitraka ilay tranonkala. Mpandraharaha Danoà telo izay reraky ny nihazakazaka nametraka ilay olana mahakivy tamin'ny fananganana taorian'ny famokarana Pixelz, sehatra serivisy izay manova, mamerina mamerina ary manatsara ny sarin'ny vokatra ho anao, manafaka ny famoronana noforoninao.
Ny e-varotra dia miorina amin'ny sary — sary an'arivony tapitrisa maro no kitihina, soloina ary ampitahain'ny mpanjifa isan'andro. Mba hahazoana ireo mpanjifa ireo, ny marika sy ny mpivarotra dia tsy maintsy mamokatra sary avo lenta avo lenta kokoa ary haingana kokoa noho ny teo aloha. Eo no idiran'ny serivisy fanarenana ataon'ny Pixelz 'fangatahana fangatahana: ny tsipika fivorian'ny Specialist Assistanted Workflows (SAW ™) manana ny fanovana sary dia lasa Software-as-a-Service.
Azonao atao ny manamboatra tanteraka ny vokatra andrasana amin'ny sarinao mba hahazoana antoka fa namboarina ho an'ny filanao e-varotra izy ireo.
Pixelz koa dia namorona sasany whitepapers fampahalalana amin'ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fampisehoana vokatra ecommerce. Manolotra fonosana vidiny efatra samihafa ny sehatr'izy ireo:
Solo - manolotra mpaka sary irery miaraka amin'ny fahaizana manala ny mombamomba azy, manangona, mampifanaraka, manampy aloka ary manitsy ny sarin'ny vokatra. Ny fonosana dia misy sary fitsapana 3 maimaim-poana ary fihodinana 24 ora (Mon-Sat).
Mpaninjara Pro - manolotra matihanina amin'ny varotra e-varotra amin'ny zava-drehetra ao Solo miaraka amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny sariny, fampifanarahana loko ary koa ny fihodinana maraina (Mon-Sat), miaraka amin'ny safidy hafainganana 3 ora.
Pro Studio - Manolotra ny zava-drehetra any Solo ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny manokana, ny fampifangaroana loko, ny famerenana ny laoniny, ny onjam-peo ary ny onboard ho an'ny studio sary matihanina. Ahitana fifanarahana ambaratonga momba ny serivisy, onboarding matihanina, fitantanana kaonty natokana ary mpampiasa maro.
API - Ampidiro ao anaty ny rindranasao an'ny antoko fahatelo ho an'ny mpivarotra sy tsena ary rindranasa finday miaraka amina API RESTful na SOAP API ny automation d'exploitation.
Tags: sary mikasikasarysary mikasikapixelzlahatsoratra famokaranasary vokatrasary vokatra